Manchester City Oo Isha Ku Haysa Daafaca Reer Brazil Ee Abner Vinicius
HomeWararka CiyaarahaManchester City oo isha ku haysa daafaca reer Brazil ee Abner Vinicius
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso horumarka daafaca kooxda Athletico Paranaense ee Abner Vinicius .
21-jirkan oo Brazil ka caawiyay inay ku guuleysato Olympic Gold sannadkii hore, ayaa 90-kulan u saftay kooxdiisa tartammada oo dhan, wuxuuna ka qayb-qaatay saddex gool iyo 10 caawin.
Sida laga soo xigtay The Telegraph , Man City ayaa u aqoonsatay Abner inuu yahay saxiix macquul ah, iyadoo Citizens ay raadineyso inay daafac bidix cusub u keento kooxda ka hor ololaha 2022-23.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda heysata horyaalka Ingariiska ay si joogta ah u indha indheyneysay daafaca balse ay u badan tahay inay tartan adag kala kulmi doonto saxiixiisa kooxaha kale ee Yurub.
Abner, oo ay weli ka harsan tahay labo sano iyo bar inuu ku sii socdo qandaraaska uu kula jiro Athletico, ayaa ku guuleystay Campeonato Paranaense iyo Copa Sudamericana labadii sano ee la soo dhaafay.
Man City ayaa sidoo kale lagu Xamanayaa inay hogaamineyso xiisaha Premier League ee weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland .